Fiheverana 5 rehefa misafidy fitahirizana rahona mba hampitomboana ny fiaraha-miasa sy ny vokatra | Martech Zone
Alarobia, Novambra 17, 2021 Alarobia, Novambra 17, 2021 Tunio ZAFER
Ny fahafahana mitahiry rakitra sarobidy toy ny sary, horonan-tsary ary mozika amin'ny fomba milamina ao anaty rahona dia fahatsinjovana manintona, indrindra amin'ny fitadidiana (fomba) kely amin'ny fitaovana finday sy ny vidin'ny fitadidiana fanampiny.
Fa inona no tokony hotadiavinao rehefa misafidy fitahirizana rahona sy vahaolana fifampizaràna rakitra? Eto, vakiantsika ireo zavatra dimy tokony hodinihin'ny tsirairay alohan'ny hanapahana hevitra hoe aiza no hametrahana ny angonany.
Fanaraha-maso – Mifehy ve aho? Ny iray amin'ireo lafy ratsiny amin'ny fitokisana ny fahatsiarovanao sarobidy indrindra amin'ny antoko fahatelo dia ny tsy mahafehy ny toerana fitahirizana zavatra. Mety tsy ho heverin'ny rehetra izany, fa ny lalàna momba ny angona any Etazonia dia tsy mitovy amin'ny Eoropa, ohatra. Tsy izany ihany, fa ny fahafahan'ireo mpamatsy fitahirizana rahona mijinja ny mombamomba anao ho an'ny tanjona ara-barotra dia mety ho varotra tsy fantatra sy tsy ilaina.
Security – Azo antoka ve ny angonako? Tsy misy mpanome fitehirizana rahona hanamarika ny tenany ho marefo, saingy nisy trangan-javatra avo lenta maro izay nahitana orinasa teknolojia lehibe lavo tamin'ny fanafihana an-tserasera. Mitarika ny lalana amin'ity sehatra ity izahay amin'ny alàlan'ny fampandehanana ny fenitra ara-miaramila. Fanampin'izay, manolotra encryption amin'ny lafiny mpanjifa izahay, izay midika fa ny angon-drakitra dia voarakotra alohan'ny hahatongavany amin'ireo mpizara. Miorina amin'ity lohahevitry ny fanaraha-maso ity, midika izany fa tsy afaka mijinja ny angonao izahay mba hahazoana tombony ara-barotra.
Cost – Ohatrinona no aloako? Ny iray amin'ireo mahasarika voalohany ny mpamatsy fitahirizana rahona dia ny vidiny mora vidy, indrindra rehefa mizara isam-bolana. Ny olana dia ny haingan'ny mpampiasa mandoro an'io fitahirizana kely io - ary lasa miantehitra haingana amin'ny mpamatsy ary mandoa vola tsy mitsaha-mitombo.
Fampiasana mora foana - Mora ampiasaina? Indrindra ho an'ireo izay manao ny dingana voalohany amin'ny tsenan'ny fitahirizana rahona, misy ny mety ho very eo amin'ny jargon. Mirehareha amin'ny fahatsorana ny fampiasanay izahay na amin'ny alàlan'ny fampiharana anay na amin'ny desktop. Raha tsorina dia ataonay mora ny mizara rakitra amin'ny fianakaviana, namana ary mpiara-miasa.
Data Recovery – Afaka mamerina rakitra ve aho? Mampalahelo fa loza mitatao tsy mitsaha-mitombo ny fanafihana an-tserasera, izay mampidi-doza amin'ny kolikoly. Manolotra ny mpampiasa izahay ny fahafahana miditra amin'ny dikan-drakitra teo aloha, izay midika fa ny zavatra toy ny ransomware dia tsy mila manimba ny fahatsiarovana taloha voatahiry ao amin'ny lampihazo.
Miaraka amin'ny fanakatonana eo an-toerana, nasionaly ary na iraisam-pirenena aza mampisaraka ny olona tsy mbola nisy toy izany, ny fiankinan-doha amin'ny fitehirizana rahona sy ny sehatra fifampizaràna rakitra mba hitazonana ny olona hifandray dia tsy mbola lehibe kokoa. Mino izahay fa amin'ny fijerena ireo fanontaniana fototra ireo, ny mpanjifa dia hanana izay rehetra ilainy hifandraisana hatrany amin'ny fotoan-tsarotra indrindra.
pCloud manome vahaolana fitahirizana rahona feno sy mora ampiasaina ho an'ny tsirairay sy ny orinasa. Ny fomba fiasantsika dia mampiditra ny fomba fijery ara-teknika miaraka amin'ny mpampiasa farany ao an-tsaina. Ny serivisy rahona hafa dia na ara-teknika loatra ary tsy mora amin'ny mpampiasa, na tsy ampy ho an'ny mpampiasa izany mba hahazoana izay rehetra tadiaviny amin'ny fitahirizana rahona.
MANDRESY iPhone 13 Pro na Samsung S21 Ultra + 2TB fitahirizana mandritra ny androm-piainany BLACK FRIDAY. Raha te hiditra amin'ny fifaninanana dia mandehana eto:
Midira amin'ny fifaninanana izao!
Tags: Fitantanam-panananabackupsrahonarahona fitehirizanafampivoarana dataData Securityfitantanana fananana nomerikafiaraha-miasa amin'ny rakitraFile managementrakitra fizaranapcloud
Tunio Zafer no CEO Ny sandan'ny anjara pCloud AG - ilay orinasa mamolavola sy manome ny sehatra fitahirizana pCloud. Manana traikefa 18 taona mahery amin'ny fitantanana sy ny varotra eo amin'ny sehatry ny teknolojia izy, ary nandray anjara tamin'ny tetikasa fandraharahana mahomby maro toy ny MTelekom, Host.bg, Grabo.bg, Mobile Innovations JSC sy ny hafa. Amin'ny maha-mpitarika sy mpitantana ny orinasa fitahirizana rahona, Tunio dia mampiroborobo ny fanavaozana amin'ny sehatra toy ny fiarovana sy ny fahombiazan'ny vidiny ho an'ny mpampiasa farany. Mamporisika ny fisainana mandroso manerana ny ekipany i Tunio, miasa mba hisy fiantraikany lehibe amin'ny tsenan'ny IT mitombo haingana, ho an'ny tsirairay sy ny orinasa.
Salesflare: Ny CRM ho an'ny orinasa madinika sy ekipa mpivarotra mivarotra B2B